Vakawanda Vobatana Vachiratidzira neMadzimai ekuHwange Colliery
Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuHwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika.
Madzimai ekuHwange aya audza Studio7 kuti vanga vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko aAmai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi.
Mumwe wemadzimai vanga vachiratidzira, Amai Tendai Sithole, vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika, asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Amai Sithole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuHwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri.
Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yeHwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuriyakakura sei.
Amai Filomela Mausi vasvorawo gurukota rezvevashandi vachiti semadzimai evashandi vekuHwange Colliery, vari kuswera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko avo achagadziriswa.
Amai Sibonisiwe Ndlovu, avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe kuti varatidzire, vati vave kutyira kuparadzira hutachiona hweHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya,VaChunkson Madzonganyika, vati vanorwadziwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuHwange aya.
VaMadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuHwange Colliery vapihwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo, vakwanisewo kurarama.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira kugurukota rezvevashandi, bazi rezvezvechirwa, uyewo kudare reParamende.
Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzeveshandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe emadhora, uye hurumende ndiyo ine zvikamu zvehupfumi zvakawanda mukambani iyi.